समाधान: मार्टिन भिजल्याण्ड
मैले प्राय: समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान सिद्धान्तको बारेमा बोलेको छु। हालैका वर्षहरूमा हामीले अधिक र अधिक हत्याका घटनाहरू र मिडियामा अन्य घटनाहरू देखेका छौं जसमा यसले ध्यान दिनु पर्छ कि यो मनोवैज्ञानिक अभियान (पीएसओपीएस) मानिसहरू खेल्नका लागी छन्। धेरै लेखहरूमा मैले यसका बारे व्याख्या गरेका छन् [...]
अवलोकन हिरासतका लागि थियम्स एच, एडिथ शिपरको बिल पछि, अघिल्लो सरकारमा खारेज गरिएको छ, सबैलाई स्वीकार गरिनेछ।
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	9 मई 2019 मा	•9टिप्पणिहरु
मानिसहरू अझै तयार थिएनन्। यस साइटबाट एक अनुरोध एडित शिपरले अघिल्लो रुट कैबिनेट अन्तर्गत प्रस्तावित बिल विरुद्ध पाँच हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर जित्यो। सारांशमा, त्यो बिलले धेरै अर्थ राख्यो कि तपाईंको साथी, छिमेकी वा परिवारले मनोवैज्ञानिकलाई फोन गर्न को लागी तपाइँलाई [...]
Google ले खोज नतिजाहरु जोस ब्रेक मेटाउँदछ - निकवी वर्स्टप्पेन मार्टिन व्रिजल्याण्डसँग जोडिएको छ
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	9 नोभेम्बर 2018 मा	•2टिप्पणिहरु
तर एक वर्ष भन्दा बढी भन्दा बढी सम्म मैले मेरो वेबसाइटमा ठूलो ट्राफिक स्पिक्स हेर्छु भने मुख्यधारा मिडिया निकी वर्स्टप्पन वा अन्य ठूला चीजहरूको बारेमा सन्देश पोस्ट गर्न थाल्नु भयो, शाब्दिक केहि पनि यहाँ आउनेछैन। जहाँ मैले 1 पृष्ठमा खोजी परिणामहरूको शीर्षमा प्रयोग गर्थें, म [...]
"नकारात्मक व्यक्तिबाट टाढा रहनुहोस्, तिनीहरूसँग हरेक समाधानको लागि समस्या छ" फेसबुक टाइप
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	16 अक्टोबर 2018 मा	•7टिप्पणिहरु
तपाईंले यसलाई फेसबुकमा देख्नुभएको छ, त्यो टिप्पणी "नकारात्मक व्यक्तिबाट टाढा रहनुहोस्, तिनीहरूसँग हरेक समाधानको लागि समस्या छ" वा त्यस्ता केहि कुरा। के 'नतिजा' छ महत्वपूर्ण को लागी नयाँ कठोर? आलोचनात्मक सोच वा स्वतन्त्र सोच बिस्तारै अधिक 'नकारात्मक' लेबल गरिएको छ। तपाईंसँग छ [...]
Hoaxes र झूटा झण्डा आक्रमणहरू: थेसिस, एन्थ-थेसिस र संश्लेषणको माध्यमबाट नयाँ वर्ल्ड अर्डरमा
मा दायर NEPNEWS, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	14 अप्रिल 2017 मा	• 16 टिप्पणिहरु
यो ग्लोबल शतरंजमा खेल्ने खेल कसरी बुझ्न सम्भव छ जस्तो लाग्छ। वैकल्पिक मिडिया साइटहरु को दुनिया मा, त्यहाँ केहि छन् जो डोनाल्ड ट्रम्प र अन्य को महिमा गर्न आए छन् जो पुतिन को नयाँ वर्ल्ड अर्डर देखि लडने वाला मान्छे को रूप मा देख रहे हो। यी अन्तिम साइटहरू प्राय: यसमा तयार छन् [...]
संसारमा दुर्व्यवहार, तर तपाईं यसलाई सुधार गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	28 फेब्रुअरी 2017 मा	•4टिप्पणिहरु
यो वेबसाइट र धेरै अन्य अक्सर दुनिया मा दुर्व्यवहार बारे लिखित। सबैभन्दा पाठकहरूलाई अब द्वारा एक elitist शीर्ष तह संसार सरकार तिर काम गर्दछ वा कि धीरे transhumanisering मानिसलाई संचालित छ कतै त्यहाँ अवस्थित फेला पारेका छन्। यसको अर्थ हामी बढ्दै छौं [...]
विश्वव्यापी आर्थिक दुर्घटना: विश्वभरका 23 स्टक एक्सचेंज
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	19 अगस्ट 2015 मा	•4टिप्पणिहरु
यस सप्ताहको अन्तमा मैले ट्रान्स रिसर्च रिसर्चको संस्थापक गेराल्ड सेलेन्टले भविष्यवाणी गरेको सम्भवतः विश्वव्यापी आर्थिक आर्थिक दुर्घटनाको बारेमा लेखे। यो देखिन्छ कि संकेतहरू पहिले नै देखाउँदै छन् कि 23 देशहरूमा स्टक एक्सचेन्जहरू पहिले नै विश्व जाँदै जानु पर्ने कगारमा (यहाँ पढ्नुहोस्)। त्यहाँ कारण हो [...]
कुल भ्रमण: 14.650.856
मार्टिन भिजल्याण्ड op राजनीतिक सल्लाहकारले पुनः शिक्षा शिविर बनाउने प्रस्ताव!
क्यामेरा2op बच्चाहरूलाई दबाब दिईएको ठूलो छ!
guppy op राजनीतिक सल्लाहकारले पुनः शिक्षा शिविर बनाउने प्रस्ताव!
सनशाइन op राजनीतिक सल्लाहकारले पुनः शिक्षा शिविर बनाउने प्रस्ताव!
मार्टिन भिजल्याण्ड op इतिहास जान्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र एजेन्डा 2030 बुझ्नका लागि